किन खाने काँचो केरा ? यस्ता छन् फाइदा
28 May 2020 | बिहीबार, १५ जेष्ठ, २०७७ | Edition : Nepal | UK | Australia
काँचो केराका पनि विभिन्न फाइदा छन् भन्ने बारे धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । काँचो केरा केही अवस्थामा त पाकेकोभन्दा पनि फाइदाजनक हुन्छ ।
केरामा स्टार्च हुन्छ जुन सुगरमा परिवर्तन हुने गर्दछ । तर काँचो केरामा पाइने स्टार्च सुगरमा परिवर्तन हुँदैन त्यसकारण यो स्वस्थ हुन्छ । जब काँचो केरा खानुहुन्छ तब यसको स्टार्च मुखभित्र महसुस गर्न सकिन्छ ।
काचो केराले पेट सफा राख्छ र तौल पनि कम गर्न मद्दत गर्छ ।
यसमा पाकेको केरा जस्तै पोटाशियम, प्रोटिन र सोडियम पनि हुन्छ र एउटा केरामा ८१ क्यालोरी मात्र हुन्छ ।
हृदयघातको सम्भावनालाई कम गर्छ ।
ब्लड सुगर नियन्त्रणमा राख्छ ।
खराब कोलेस्ट्रोललाई हटाउन सहयोग गर्दछ ।
तौल कम गर्न सहयोग गर्दछ ।
शरिरमा पौष्टिक तत्व कम गर्न सहयोग गर्छ ।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातमै मेलम्चीको पानी वितरण गर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको दुबै सदनमा आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उक्त क
कर्णाली प्रदेशमा उच्च पर्वतीय खेल कार्यक्रम सञ्चालन हुने
काठमाडौँ । सरकारले कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद सञ्चालन हुनसक्ने गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार विकासका गर्न, उच्च पर्वतीय खेल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको
जनार्दन शर्माले सशस्त्र प्रहरीको टोली र गाडी फिर्ता गरे
काठमाडौँ । पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सशस्त्र प्रहरीको टोली र गाडी फिर्ता गरेका छन् । नेकपा नेतासमेत रहेका शर्माले आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी र गाडी बिहीबार फिर्ता गरेका हुन्